AKHRI-Magacyada saraakiisha Alshabab ee lagu diley duqaymihii Jubbada dhexe. – Radio Daljir
AKHRI-Magacyada saraakiisha Alshabab ee lagu diley duqaymihii Jubbada dhexe.
Agoosto 15, 2016 3:01 b 0
Kismaayo, Aug 15 2016–Ciidamada sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ayaa dilay 30-dagaalamayaal ka tirsan Xarakada Al-shabab waxaana kujira hogamiye sare laba howlgal oo kala duwan kana dhacay Koonfurta Soomaliya afartii maalmod ee ugu dambeesay.
Mid kamid ah saraakiisha dowladda ayaa u sheegay wakaalada wararka Shinwa in howlgaladaasi ay dhaceen 10-ka bishaan August waxana lagu bartilmaamaysaday 13-dagaalamayaal ka tirsan Al-shabab oo ku sugneed degmada Sakow.
Waxa uu sarkaalkaani oo diidey in magiciisa lasheego in ciidamada Mareykanka oo taageraya ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya ay duqeyeen saldhig ay lahaayen Al-shabab oo Sakow ku yaalay waxana uu sababay duqeyntaasi geerida 30-dagaalamayaal,howlgalka labaad ayaa dhacay 13-ka August waxana kamid ahaa dadkii dhintay hogaamiyaal sar sare.
Sarkaal dhinaca amaanka u hadlay ayaa sheegay in loo maleenayo howlgalka in lagu dilay lagu hogaamiyaha Xarakada Al-shabab Abu Cubeyda, sarkaalka ayaa tilmaamaya in sidoo kale ay jiri karaan in howlgalka lagu dilay 3-ku xigeenadiisa waxana kamid ah afhayeenka Al-shabab Abu Muscab iyo qof magacisa lagu soo gaabiyay Abu Cumar.
Wasiiro ku ganacsayray Isku-shaandhayntii xukuumadda Soomaaliland.